Ciidamo Etobiyan Ayaa Magaalada Cad Ee Gobolka Awdal Ku Dilay Dad Rayid Ah | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamo Etobiyan Ayaa Magaalada Cad Ee Gobolka Awdal Ku Dilay Dad Rayid Ah
Muqdisho (Keydmedia) - Wararka ay Keydmedia Ka heleyso Deegaanka Cad ee ka tirsan Gobolka Awdal ayaa sheegaya in Ciidamo Eithopian ah ay halkaasi rasaas ooda kaga qaadeen gaari rikaab ah oo ay saarnaayeen dad Shacab ah oo maraayay wadada u dhaxeysa Deegaanka Cad ee Gobolka Awdal, isla markaasina ku sii jeeday Magaalada Wajaale.
1 Ruux ayaa ku geeriyooday tira kalana waa ay ku dhaawacmeen ka dib markii sida la sheegay gaarigii ay saarnaayeen ay ciidamo Eithopian ah ay uga shakiyeen in uu gaariga saarnaa kontorbaan isla markaasina rasaas ooda kaga qaday.
Gudoomiyaha Magaalada Cad ayaa Keydmedia u xaqiijiyay dhimashada qofka rayidka ah kaa soo ahaa sida uu sheegay darawalkii gaariga waday waxaana uu gaariga ku sheegay in uu ahaa nooca ay Soomaalida u taqaano TOYOTA .
Bashiir Cumar oo ah Gudoomiyha Magaaladaasi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in arintaani ay tahay mid ay aad ugu xunyihiin ka maamul ahaan waxaana uu ku baaqay in ay ciidamada Eithopianka ah ay ka fiirsadan gawaarida dadka shacabka ah ee waqtigaasi ka ag dhow halka ay ku sugan yihiin.
Ma ahan markii ugu horeysay ee gaari shacab ay saaran yihiin oo fal ceynkaan oo kale ah logeysto.